Ghostwriter Biology iyo Biochemistry I Waxaan Ka Caawineynaa Qorayaasha shaqadooda
Qorayaashayagu waxay leeyihiin khibrada lagama maarmaanka u ah cilmiga bayoolajiga iyo cilmiga biochemistry
Barashada cilmiga bayoolaji waa mid ka mid ah koorsooyinka sayniska dabiiciga ee ugu caansan Jarmalka. Tani waxay markeeda horseed u noqotay namer clausus mawduucan, kaas oo, si kastaba ha noqotee, miisaankiisu ka duwan yahay jaamacadaha. Xaaladaha qaarkood heerka celceliska loo baahan yahay ee Abitur waa 1,6, jaamacadaha kale waa 2,5. Shahaadada koowaad ee jaamacaddu waa Bachelor of Science. Tan waxaa ku xigta shahaadada mastarka iyo badanaa sidoo kale dhakhaatiirta. Bayoolaji sidoo kale waa suurtogal jaamacadda cilmiga xirfadaha, laakiin maaha shahaadada bachelorka. Dhaqtarnimada guud ahaan waxay suurtogal ka tahay oo keliya hal jaamacad. Mawduuca bayoolaji wuxuu ka hadlayaa su'aasha aasaasiga ah ee sida nolosha runti u shaqeyso. Ie. ma jiro kala sooc u dhexeeya noolaha iyo dhirta. Dhinac, tani waxay u baahan tahay aragti badan inta lagu guda jiro koorsada. Dhanka kale, waqti badan shaybaarka waa in lagu qaataa tijaabooyin. Tan waxaa kale oo ku jira diyaarinta xayawaanka (sida jiirka, jiirka, iwm). Maaddaama suugaan badani ay tahay oo kaliya lagu qoro Ingiriis, waxaa lagama maarmaan ah in la helo amar wanaagsan oo ah qorista iyo ku hadalka Ingiriiska. Xaqiiqdii, shahaadada mastarka badanaa waxaa lagu qaataa oo keliya Ingiriisiga.
Shahaadada aasaasiga ama bachelorka waxaa ku jira maadooyinka
Guud ahaan, dabiici ahaan iyo dabiici ahaanba chemistry
Microbiology iyo bayotechnoolajiyadda
Cilmiga Jirka iyo Xayawaanka
Waxaan kaa caawin karnaa waqtigan sidoo kale. Shaqadaada cilmiga ah ee sidaas ah Shaqada guriga, shahaadada Masterka, Qoraalka PhD ama waxaad naga codsan kartaa qoraal. Kaliya nala qaado Kontakt tusaale ahaan by Mail oder phone ama codso mid bilaash ah dib u xusuusasho mid. Kadib waxaan kuu soo wici doonaa gebi ahaanba bilaash oo waxaan qaadan doonaa mashruucaaga. Koorsada dabcan waxay leedahay dhowr diiradood oo kala duwan oo aad u dooran karto arday ahaan. Maadooyinka waaweyn qaarkood siday u kala horreeyaan Mawduucyada waa, tusaale ahaan, jirka, nafaqada, cilmiga dhirta, cilmiga bayoolajiyadda, bayoolajiga iyo bayoolaji. Mawduucyadan cilmiga bayoolajiga ahi waxay ka mid yihiin maaddooyinka adag ee inta badan la weydiisto. Intaas waxaa sii dheer, waxaa jira layliyo inta lagu jiro fasaxa simistarka oo ay tahay in lagu dhammaystiro jaamacadda ama xarun kale. Waraaqaha muddada iyo waraaqaha aqoon-isweydaarsiga waa in la dhammaystiro. Qorayaashayada ruug-caddaaga ahi waxay si xirfadaysan ugu fadhiyaan aaggaaga cilmi-baarista bayoolojiga. Waxaad ku qoto-dheeraatay maadooyinka shaqsiyeed. Qorayaashu waxay aqbalaan oo keliya shaqada ku dhacda mawduucooda. Waxaad khibrad dhowr sano ah ku leedihiin goobtaada oo uma baahnid inaad waqti badan ku qaadato aaggan. Qorayaashu waxay isla markiiba bilaabi karaan xalinta dhibaatooyinka ardayda waxayna qori karaan warqadooda. Waa inaad ka faa'iideysataa tan maadaama uusan ardaygu qabsan karin toddobaadyo gudahood. Qorayaasheennu waxay ku faraxsan yihiin inay qoraan shaqadaada cilmiyeed. Albaabo badan ayaa u furan ardayda ku guuleysatay koorsada. Shahaadada sayniska dabiiciga ah aasaasiyan waa ka duwanaan barnaamijyada kale ee shahaadada. Qof kastaa ma dhammaystiro shahaadada sayniska. Qeyb sare oo sirdoon iyo adkeysi iyo waliba istiraatiijiyad wanaagsan oo lagu abuuro koorsada ayaa lagama maarmaan ah.
Qorayaasheennu waxay leeyihiin waayo-aragnimo sannado badan leh aqoontaanna waxay ku abuuri karaan waxyaabo badan oo aan adiga lagaa fikiri karin muddo gaaban. Qorayaashayagu waxay qoraan shaqadaada. La xiriir Si fudud noo soo dir an Mail oder phone. Waan duubi doonnaa hawshaada isla markaana waan ku siin doonnaa isla markiiba dalab by. Qalin-jabiyaha ahaan, waxaad ka shaqeyn kartaa meel kasta oo ay ku lug leedahay cilmiga biochemistry. Tani waa lama huraan maalmahan. Tusaale ahaan, waad sii wadi kartaa cilmi-baaristaada sida cilmiga bayoolaji ee jaamacadda ama waxaad kubilaabi kartaa wakiilka daawada. Hadda nala soo xiriir oo dalbo taada shahaadada Masterka oder Maqalka. Waxaad sidoo kale na siin kartaa mid dib u xusuusasho si loo hagaajiyo Kadib waan ku soo wici doonnaa waqti adiga kugu habboon. Qorayaasheena ayaa ka caawin doona abuurista shaqooyinka iyo su'aalaha.
Shaqada tacliimeed, waa inaad kireysataa hay'addeena qorista qoraaga. Si aad u hesho darajo wanaagsan, waa inaad caawimaad raadsataa. Sababtoo ah hawlo badan oo hordhac ah waa in la qabtaa si loo soo gudbiyo shaqo cilmiyaysan oo wanaagsan. Waa inaad si joogto ah uga shaqeysaa iyada oo aan lagaa dhex gelin, haddii kale waxaad si dhakhso leh uga bixi doontaa mawduuca. Cilmigaaga daa Shaqada guriga qor. Sidoo kale waa inaad ku tiirsanaataa caawimaadda qoraaga cirfiidka naga ah tayada qoraalkaaga waxbarasho. Kuweena Qorayaashu waxay leeyihiin waayo-aragnimo sannado badan ah oo ku saabsan aaggooda cilmi-baarista oo aad haysato shahaado maadadaada ah. Kama baran kartid aqoontaan dhowr toddobaad inta lagu guda jiro waxbarashadaada. Der Bachelor iyo Maqalka waxaa lagu gaari karaa oo kaliya dadaal badan. Markaad qalin jabiso waxaa jira ikhtiyaarro badan oo aad adigu awoodid oo kale sayniska tacliinta sii wad inaad xirfad yeelato awoodo. Waxaa jira shaqo-bixiyeyaal badan oo suurtagal ah inaad qalinjabiso. Meelaha caadiga ah ee shaqada ee qalin-jabiyaha waa maalmahan
Qoraal-ku-qorista cilmiga nafleyda iyo cilmiga biochemistry
Qoraalka ghost ee aagaaga cilmi baarista ayaa kaa caawin doona. waad ka heli doontaa ... Mareykanka Shaqada guriga oder Darajada Bachelor. Sidaa darteed amar Shaqadaada hada!
Bayoolaji iyo biochemistry ee warshadaha dawooyinka
Warshadaha dawooyinka waxay had iyo jeer raadinayaan xalalka lagu daaweeyo cudurada. Intaa waxaa dheer maadooyinka sayniska dabiiciga ah chemistry iyo biochemistry oo muhiim ah. Cilmi-baaris ku saabsan diyaargarowga cusub ayaa daaweeya dadka waxayna u suurtagelisaa inay cimri dheereeyaan.
Bayoolaji iyo bayoolaji nolosha xirfadeed
Ka dib markii aad ku guuleysatay shahaadada bachelor-ka, waxaad naftaada ku sii horumarin kartaa noloshaada xirfadeed oo aad ku sameyn kartaa xirfad. Waad hoggaamin kartaa hay'adaha cilmi-baarista ama hoggaanka shaybaarrada. Adiga oo ah madaxa shaybaarka, waxaad kasbataa si aad u wanaagsan, laakiin sidoo kale waxaad wax badan ku biirisaa guusha shirkadda. Waxbarashadaada waxaad u socotaa jihada saxda ah. Wax ka samee! Waan kaa caawin doonaa erfolg keen! Qoraa-yahankeenna aqoonta leh ayaa shaqada kuu qaban doona.
Qeybta cilmiga bayoolajiga iyo biochemistry ee shirkadaha ganacsiga
Shirkadaha ganacsigu aad ayey u xiiseeyaan ardayda qalin jabisay. Ka qalin jabis ahaan, waxaad isha ku haysaa heerka farshaxanku hadda ku sugan yahay. Waxaad ku dari kartaa fikradahaaga shaqadaada loo shaqeeyahaaga. Kaliya qaado Kontakt anaga. Waxaan xallinaynaa caawimaad!
Hubinta tayada ee berrinka biochemistry